प्रधानमन्त्री भएको ३६ महिनामा ओलीले के-के गरे ? यस्ता छन् ओली सरकारका हालसम्मका उपलब्धी – Paluwa Khabar
प्रधानमन्त्री भएको ३६ महिनामा ओलीले के-के गरे ? यस्ता छन् ओली सरकारका हालसम्मका उपलब्धी
फागुण ३, २०७७ सोमबार 27
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन वर्षे कार्यकाल आज पूरा भएको छ ।
पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकारको जिम्मा पाएका ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कलंकको टिका लगाएका छन् ।
तर, यो तीन वर्षमा ओलीले अतिक्रमित भू–भाग लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा जारी गर्नेदेखि रेल ल्याउने सम्मका काम गरे ।
यस्ता छन उनको कार्यकालमा भएका राम्रा कामका सूची :
मुलुकको नयाँ नक्सा जारी
सरकारले गत ७ जेठमा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र त्यसको पूर्वको भू–भाग नेपालको अंग भएपनि यसअघिको नक्सामा यी भू–धाग समेटिएका थिएनन् ।
गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएका आठ हजार रोपनी जग्गाको पहिचान, फिर्ता ल्याउन सिफारिस
सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेर व्यक्तिका नाममा लगिएको भन्दै गुमेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा गएका जग्गामध्ये ५ हजार रोपनी जग्गा सरकारी हो भने दुई हजार चार सय रोपनी गुठी र एक सय २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हो । अहिले त्यति जग्गाको मूल्य ६ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान आयोगको छ ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशभरको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाको अवस्था बुझ्न सरकारले ६ जेठ ०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले डेढ वर्षको अध्ययनपछि गत बुधवार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन्फिङको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भयो ।करिब २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्र प्रमुखले गरेको यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक मानिएको थियो । राष्ट्रपति चिन्फिङ १२ अक्टोबर २०१९ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनको भ्रमणलाई सरकारको विशेष कूटनीतिक उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न आर्थिक साझेदारीका विषयमा सम्झौता भएका थिए ।
नयाँ रेल आयो, सञ्चालनको तयारी
प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्नो भाषणमा पटक—पटक बोलेका विषय थियो, रेल । गत १ असोजमा नेपाल आइपुगेको थियो भारतीय रेल । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ । त्यसको लागि रेलको भाडादरको समेत प्रस्ताव गरिसकेको रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।
पानीजहाज कार्यालय स्थापना
रेल पछि प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणको अर्को मुख्य पाटो थियो, पानी जहाज । त्यसको सञ्चालनका लागि सरकारले कार्यालय स्थापना गरेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा स्थापना गरिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाट्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । उता चितवनको नारायणी नदीमा क्रुज सञ्चालनको सफल परिक्षणसमेत भइसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको अर्को उपलब्धी हो, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना । कोषबारे त्यसबेला धेरै विवाद भएपनि यसको स्थापनालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । निजी क्षेत्रको पेन्सन तथा बीमाजस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गर्न र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न कोषको स्थापना गरिएको हो ।
सगरमाथाको नयाँ उचाई सार्वजनिक
सरकारले पहिलो पटक आफ्नै साधन स्रोत तथा जनशक्तिको बलमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाईं सार्र्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकार र चीनले संयुक्त रुपमा सगरमाथाको नयाँ उचाईं सार्वजनिक गरेका थिए । सगरमाथाको उचाई बढेर ८८४८।८६ पुगेको छ । सगरमाथाको यो उचाईलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै उपलब्धीका रुपमा लिएका थिए ।
लामो समयको सास्ती एवं बिरोधपछि काठमाडौंका उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडक खाल्डाखुल्डी मुक्त भएका छन् । काठमाडौंमा ढल, सडक निर्माण, तार व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि बिगारिएको सडक वेवारिसे छोडिदिँदा बनेका खाल्डाखुल्डीले सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्दै आइरहेका थिए ।
नागरिक एप सञ्चालन
सरकारले प्रदान गर्दै आएको सबैै सेवालाई डिजिटालाइज गरी एकै प्लेटफर्मबाट सेवा दिने लक्ष्यसहित नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब एपबाटै विभिन्न सरकारी अनलाइज सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाताको परिचयपत्रको विवरणसँगै नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको आतामा जम्मा भएका रकमको पनि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक आश्रित मानवरहित अभियानको थालनी
प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा आश्रित मानवरहित अभियान सुरु गरेका थिए । जसअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालकासँगको सहकार्यमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरुबाट बेसहारा सहयोगापेक्षीहरुको उद्वार तथा पुनस्र्थापना सुरु गरिएको छ ।
सरकारले सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने अड्डा मालपोत कार्यालयमा डिजिटल अभियान सुरु गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो अभियान थालेको हो ।
‘क्यासलेस’ कारोबारलाई व्यापकता, पैसा बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त
गोजीमा पैसा बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने वातावरण बन्दै गएको छ । रेष्टुराँ, क्याफे, सपिङ मल मात्रै होइन अब तरकारी किन्दा पनि ‘फोन पे’ मार्फत नै भुुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले नगद बोक्नु पर्ने झन्झटबाट नागरिकहरू मुक्त भएका छन् ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गले गति लिएसँगै नेपाल सुरुङमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेकोे छ । जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ ठेक्कामा सुरुङ निर्माणको काम सुरु गरेको हो । निर्माणको सम्झौता २०७३ सालमै भएपनि सुरुङको शिलान्यास कात्तिक २०७६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए ।
अधिकांश नागरिक करको दायरामा, ६२ प्रतिशतले खोले बैंक खाता
गएको तीन वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगती भएको देखिन्छ । करिब ३० लाख ५८ हजार करदाता करको दायरामा आएका छन् भने एक नेपाली एक बैंक खाता अभियानअन्तर्गत करिब ६२ प्रतिशत नेपालीले खाता खोलेका सरकारी दावी छ ।
घट्यो भन्सार दर, करमा पनि छुट
यो तीन वर्षमा सरकारले कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन तथा स्वास्थ्यमा हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार दरमा संशोधन गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले कृषिमा आधारित सहकारी उद्योग पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । कपडा उद्योगहरुले आयात गर्ने मिल, मेशिनरी पाटपुर्जा एवं केमिकलहरुमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लगाइएको छ । स्वदेशमा प्रशस्त प्रयोग हुने कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी, महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटेरी प्याड, फिड सप्लिमेन्टजस्ता उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको छ ।
भन्सारमा एकद्वार प्रणाली
सरकारले भन्सार जाँच पास प्रणालीलाई सरल बनाउन भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट बनाउने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरि वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दश प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यापारलाई थप सहज बनाउन अन्तराष्ट्रिय व्यापार स्वचालित प्रणालीबाट जाँच पास गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको छ ।
उद्योगीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट
चिया, कपडा एवम् डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगमा लाग्दै आएको आयकरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । लघु उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तयारी वस्तुको भन्दा औद्यागिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुल कम गरिएको छ ।
बढ्दै वैदेशिक लगानी
पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक लगानीतर्फ सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा १३२।५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ अर्ब ७४ करोड लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ भने स्वदेशी तथा वैदेशिक गरी कूल लगानी प्रतिबद्धतामा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ सय ५२ अर्ब पुगेको छ । लगानी गर्ने वातावरण स्थापित गर्न स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मोबाइल एपबाट उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्ने
बजार अनुगमन र उपभोक्ताको गुनासो नगन्य मात्रामा छन् । यस्ता गुनासा व्यवस्थापनका लागि ‘कन्जुमर कम्प्लेन’ नामक मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो एप मार्फत नै उपभोक्ताले फोटो वा भिडियोसहित उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ग्यास पाइपलाइन अध्ययन
भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको सुनौवलसम्म रासायनिक मल उत्पादन गर्न तथा आवश्यक प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्न पाइपलाइन निर्माणको पूर्व साम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ ।
गएको तीन वर्षमा नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ भने दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था पुग्न लागेको छ । कृषि क्षेत्रमा ३५ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा भएको छ । गएको तीन वर्षमा ४९६ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर, ३३६ पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, ३ वटा ठूला बजार पूर्वाधार र ३७ संकलन केन्द्र तथा हाट बजारको स्थापना भएको छ ।
विषादी परीक्षण ल्याबको स्थापना
विराटनगर, भैरहवा र हेटौडालगायत देशभर ७ स्थानमा विषादी अवशेषको द्रूत विश्लेषण परीक्षण र अन्य थप तीन स्थानमा सबै खालका विषादीहरूको नमुना परीक्षण गर्ने ल्याबहरुको स्थापना भएको छ । पशुहरुमा कृतिम गर्भाधानको संख्यालाई ९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
सिङ्गो देश सडक सञ्जालमा
हिमाली जिल्ला हुम्लाको भूगोल राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसस“गै ७७ वटै जिल्ला सडकसँग जोडिएका छन् ।
यो वर्ष हुम्लाको तल्लो क्षेत्रका ताँजाकोट, अदानचुली र सर्केगाड गरि तीन गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी एकमात्र जिल्ला थियो, हुम्ला ।
Prevघि’सा’र्दै लै’जाँदा ढुं’गामा ला’गी चो’ट लागेर छाला खसेको प्रहरीको आशंका ,पुरा पढ्नुहोस नजिकैका यी ब्याक्तिहरुलाई गरियो आशंका
Nextभा’ग’रथी ह’त्या प्र’करण, काठमाडौँबाट एक जना प’क्राउ
नेपालमा नयाँ प्र’जातिको कोरोना फैलिएको आशंका, यस्ता छन् ल’ क्षणहरू?
संघिय संसद अधिवेशन तत्काल बाेलाउन कांग्रेस र जसपाकाे माग
बर्दियामा कांग्रेसकाे प्रर्दशन भिडियाे सहित
भग्वान शिवको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् आज फागुन ५ गते बुधबारको राशिफल